Manatsara ny fahombiazana hanatsarana ny vokatra | Martech Zone
Manatsara ny fahombiazana hanatsarana ny vokatra
Alatsinainy Aprily 13, 2009 Talata, Oktobra 9, 2012 Douglas Karr
Ny bilaogin'i Tripp Babbitt sy ny taratasim-baovao ao amin'ny Mieritreritra rafitra vaovao Tena nitombo teo amiko.
Hatramin'ny nihaonany tamin'i Tripp tamin'ny hetsika fitenenana isam-paritra dia nizara tamiko iray taonany ny fahalalany sy ny zavatra niainany tamiko mivantana, tao amin'ny bilaoginy, ary tao amin'ny bilaoginy.
Iray amin'ireo antony heveriko fa tiako be ny asa sorany sy ny lesona azony dia ny fandinihan'i Tripp an-kerisetra ireo orinasa ary matetika no hitany fa ny refy sy ny tanjona dia tsy mifanaraka velively amin'ireo tena olana.
Case in point dia orinasa iray mandrefy ny isan'ny fiantsoana mpanjifa ary manome valisoa ireo ekipan'ny mpanjifany mifototra amin'ny habetsaky ny antso azon'izy ireo atao. Araka ny fanazavan'i Tripp, ny orinasa dia tsy namakafaka ny antony nahazoan'izy ireo ny antso sy ny vidin'ny ekipa serivisy ho an'ny mpanjifa raha oharina amin'ny fanitsiana ny olana amin'ny faka izany no nahatonga ireo antso voalohany.
Ny olana sy ny soritr'aretina dia mizara amin'ny sampana roa izay tsy mifanara-miasa na oviana na oviana ary tsy manana tanjona iraisana. Tsy misy tombony azo amin'ny famahana ny olana tany am-boalohany satria ny olana aterak'izany dia atolotra ny departemanta manaraka fotsiny.
Nandritra ny fotoana elaela aho dia mpisolovava an'i mahita izay mandeha ary mandamina azy tsara, toy izay hifantoka amin'izay tsy mandeha.
Misy be dia be ny mpitarika malaza sy ny rafitra fandraharahana mino ny mifanohitra amin'izany… dia hilaza aminao izy ireo fa raha mahomby 99% ianao dia tokony hiasa hanatsara an'io 1% farany io. Dingana mandreraka tsy misy fetra izy io ary mamela ny lalan'ny mpiasa voaroaka sy sorena.
Mino aho fa ny mpitarika, orinasa ary tetika mahomby dia mampitombo ny fahombiazana fa tsy manandrana mampihena ny tsy fahombiazana:
Tao amin'ny media sosialy, mpisolovava aho mamela sy manome hery ireo orinasa hampiasa media sosialy fa tsy mampihatra ny lalàna sy ny fetra.
Amin'ny bilaogy dia manandrana aho manome antoka fa ny atiny soratako mamporisika ny mpamaky manandrana teknolojia vaovao fa tsy manalavitra azy ireo.
Amin'ny maha-mpitarika ahy dia mino aho mampifanaraka ny talentan'ny mpiasa amin'ny filan'ny fikambanana toy izay manandrana manery ny mpiasa ho amin'ny toerana tsy azo antoka. Raha manana wrench ianao dia aza lazaina aminy fa tsy marotoa tsara. Mandehana maka marotoa raha izany no ilainao.
Amin'ny marketing an-tserasera dia ilaina ny manohy manamboatra izay mandeha amin'ny marketing an-tserasera fa tsy manandrana mamantatra izay tsy nety. Mazava ho azy fa tokony hanandrana ianao rehefa misy ny fotoana mety, fa atosiho amin'ny làlan'ny fahombiazana ny mpihaino anao fa tsy hiezaka hisoroka ny tsy fahombiazana fotsiny.
Na dia amin'ny maha ray aman-dreny ahy aza, hitako fa mahomby kokoa io fomba io. Raha tian'ny zanako ny Matematika (izay tian'izy ireo) nefa tsy tiany ny Fianarana ara-tsosialy dia tsy nataoko mamaky boky tantara isan-kariva izy ireo… namporisika azy ireo bebe kokoa aho tamin'ny matematika. (Nangataka naoty mendrika tamin'ny lohahevitra rehetra aho, na izany aza). Samy manana naoty lehibe ny zanako… ary ny zanako lahy izao dia mpianatra mendri-kaja ao amin'ny IUPUI, amin'ny Math and Physics.
Namaky teny tao amin'ny Sparkpeople aza aho, tranonkala iray ho antsika izay matavy loatra ary mitady ho salama, fa ny fandinihana natao tato ho ato dia nampiseho fa ny olona manao fanatanjahan-tena mandritra ny 10 minitra isan'andro Manana fahombiazana bebe kokoa noho ireo izay miasa ny 90 minitra voatondro. Ny fampihetseham-batana fohy kokoa dia manome fahatsapana fahombiazana (fa tsy hijaly) ary ny olona dia mety hijanona amin'ny fomba mahazatra.
Tags: fitantanana fitantananamanatsara ny vokatraampitomboina ny fahombiazana
Ilaina ny fandrefesana ny haino aman-jery sosialy!
Apr 14, 2009 amin'ny 9: 04 AM
Mampihomehy ianao nanoratra momba an'io androany, satria vao omaly aho no nihaona tamin'i Carla sy Anna avy amin'ny Ignite HR Consulting ary niresaka momba ny programa fanofanana ataony antsoina hoe "Hery" izay toa mameno ity lahatsoratra ity. Ny noraisiko dia ny programa Strengths - fa tsy mikatsaka ny hanamafy ny fahalemena - dia manampy ny olona tsirairay hamantatra ny tanjany, izany hoe ny zavatra hain'izy ireo sy ny zavatra mahaliana azy, mba hahafahany manao bebe kokoa amin'izany ho tombontsoan'ny fikambanana. ary ny hahasoa ny tenany.
Torak'izany koa, rehefa nihantitra aho dia nitady hampiasa bebe kokoa ny heriko amin'ireo zavatra mahaizako sy ankafiziko, satria: a) tsy misy afa-tsy ora maro ao anatin'ny andro (sy eo amin'ny fiainana), koa nahoana raha miezaka manao tsara kokoa izay azoko; b) misy mihoatra noho ny tsy maintsy ataoko izay ratsy na tsy ankafiziko; ary c) manome hery ny fananganana fahombiazana eo amin'ny fahombiazana (na fahombiazana lehibe na kely, satria raisiko izay azoko. :)).
Mirary tontolo andro mahafinaritra ry namana.
Apr 14, 2009 amin'ny 10: 16 AM
Mifantoka amin'ny lafy tsaran-javatra sy ny zavatra tianao. Tsy mpamorona tranonkala aho ary na dia miezaka aza aho dia tsy hiezaka hahafehy izany mihitsy. Misy hafa any izay eny an-dalana dia hanao asa tsara kokoa noho izaho ary manao izany amin'ny tsy fahasorenana. Mila mifantoka amin'izay mahasoa ahy sy izay haiko aho ary mihatsara kokoa amin'ireo zavatra ireo.